Himatni dirqiin gudeeduu Neymaarirratti banamee ture adda cite - BBC News Afaan Oromoo
Himatni dirqiin gudeeduu Neymaarirratti banamee ture adda cite
Poolisiin Braaziil taphataan Kubbaa miilaa beekamaan biyyattii Neymaar, yakka dirqiin gudeeduu raawwateera jedhamee itti shakkamee qorachaa ture ragaa argachuu hin dandeenye jechuun himaticha adda kute.
Waajirri Abbaa Alangaa biyyattii dhimmicha irratti murteen dhuma akka kennamu gara abbaa Alangaa himaticha baneetti ni dabarsa.
Paastariin Kooriyaa yakka dirqiin gudeeduu raawwate adabame
Qorannoon kan eegale moodeeliin lammii Braaziil Najiila Triindad ji'a lama dura hoteela Fraans magaala Paariis keessatti argamutti taphataan kubbaa miilaa kun na miidhuuf yaaleera jechuu ishee hordofeeti.
Neeymaar himatani kun dhara, dorsifamaan tures jedheera.
Dhimmichi Braazilitti ilaalamuun miidiyaalee biyyattiif oduu guddaa ta'eera.
Murtee alanaa kanarratti murtee poolisii keessa galuu waan hin feeneef yaada hin laannuu jedheera dubbii himaan taphataa kanaa.
Taphataan gatii mi'aa kilaba biyya Fraans kun ji'a darbe marsaalee miidiyaa hawaasummaa isaarratti viidiyoo daqiiqaa 7 gadhiisuun dirqiin gudeeduun himatamuufi wanti inni raawwate tokko akka hin jirre beeksiseera.
Sana boodas moodeeliin yakkichi narratti raawwatameera jettu Najiilaan, televizyiinii tokko waliin gaaffiifi deebii gochuun viidiyoolee sagalee guddaan wayita walitti muggutan agarsiisu gadhiifteetti.
Poolisiin dhimmicha hordofaa ture, viidiyichi maqaa xureessuu malee ragaa waan ta'uu of keessaa waan hin qabneef maqaa balleesuun ishuma deebisee himateera jedha AFP'n.
Abbaan seera guyyoota 15 booda dhimma kanarratti murtee dhumaa kenna.
Paastariin Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-rock duuka buutotaa dirqiin gudeeduun hidhame
Dubartiin dhiira dirqamaan ni gudeeddii, seerri maal jedha?